सन् 1 993मा कम्पनी "बुलियन" स्थापना भएको थियो। पहिले, यो "लाओटोर्म" र त्यसपछि - "ब्रेनर" भनिन्छ। आजसम्म, "बुरीरीन" कम्पनी भट्टराईको उत्पादनमा व्यस्त छ, साथै फायरप्लेसहरू। साथै, स्नान र ग्याँस जनरेटरहरू निर्माण गरिएका छन्। यो ब्रान्डका सबै उत्पादनहरू कठोर परीक्षणको विषय हुन्। नतिजाको रूपमा, एक धेरै उच्च गुणस्तरको उत्पादन प्राप्त गरिन्छ, जसको लागि एक ठूलो ग्यारेन्टी दिइएको छ।
"बुलियन" को उपस्थिति पानी को सर्किट संग स्टोव
पानीको सर्किट प्रतिक्रियाको साथ पहिलो ओवन "बुलियन" राम्रो लाग्यो। धेरै सन्दर्भमा यो तथ्यको कारण थियो कि उनी सुरक्षित रूपमा 100 क्युबिक मीटरको कुल क्षेत्रको साथ कोठामा हिँड्न सक्थे। एम। तिनीहरू प्रायः ठूलो उद्यम र फ्याक्टरीहरूमा प्रयोग गर्थे।
कम्पनीका विशेषज्ञहरूले ध्यान दिनुहोस् कि यस्तो उपकरणहरूको दक्षता कहिलेकाहीं 70% सम्म पुग्छ। साथै, एकले पानीको सर्किटको साथ "बुलियन" स्टोभको उच्च स्तरको प्रदर्शनमा ध्यान दिनुपर्छ। यो ब्रान्डका केहि मोडेलहरू6घण्टा भन्दा बढीका लागि लगातार काम गर्न सक्षम छन्।
पानीको सर्किटसँग फर्नेस
एक पानी सर्किट संग भान्साहरु कोठा मा खुली हीटिंग सिस्टम संग विशेष रूप देखि काम गर्दछ। यो पनि ध्यान दिइनेछ कि गर्मी वाहक मा वृद्धि आफैले हुन्छ। सामान्यतया, पानीको सर्किटमा ओवन दुई कक्षबाट बनाइएको छ। उपकरणको तलमा ग्याँसिसनसन खण्ड हो। पछिबर्नर, बारीमा, शीर्ष मा स्थित छ।
यसको अतिरिक्त, दुई नियामकहरू छन् कि भट्ठीको शक्ति नियन्त्रण गर्दछ। हीट एक्सचेंज ट्यूबहरु गैसीकरण कक्ष मा स्थित छ। तिनीहरू माध्यमिक विभागसँग जोडिएका छन्। साइड प्यानलमा एकै समयमा समय नियन्त्रकसँग चिमनीको शाखा पाइप हो। तल भट्ठी को डबल रियर दीवार हो। यन्त्रको प्राथमिक क्यामेराले आश प्यानमा जोडिएको छ। एकै समयमा, उडा भट्ठी पावर नियामक को ह्यान्डलसँग जोडिएको छ। त्यहाँ एक विशेष लोडिङ ढोका पनि छ। इंजेक्टर भट्ठी को सामने पर्खाल को पछि स्थित छ।
यो मोडेल "खरीदारों" बाट समीक्षाहरू अझैसम्म प्राप्त भएको छैन, किनभने यो अहिले धेरै राम्ररी थाहा छैन। यो घर तापनि तापनि, साथै औद्योगिक सुविधाहरूको लागि सिर्जना गरिएको थियो। यो सुविधा विभिन्न प्रकारको ठोस ईंन्धनको प्रयोग हो। प्रायः यस्ता भान्साहरू कोइला वा परम्परागत अग्लो काठको साथ भरिन्छ।
एकै समयमा, एक ट्याबमा, यो लगातार7घण्टा भन्दा बढी काम गर्न सक्षम छ, यसैले बोइलर "एक्वा-ब्रीनरन" ("बुलरन") लाई विशेषज्ञहरूले बाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएका छन्।
भट्ठीको बारेमा उपभोक्ताहरूको टिप्पणी "बुलबुजनी देश" (टाइप 00)
समीक्षाहरू "बुलरन देश" राम्रो छ। धेरै ग्राहकहरूले यो मोडेल यसको बहुमुखी क्षमताको लागि मनपर्यो। यसले सुरक्षित रूपमा आगो काठ लोड गर्न सक्छ, र कोइला। एकै समयमा, यो भट्ठी राम्रो प्रदर्शन छ र 100 क्यूबिक मीटर सम्म एक कोठा ताप्न सक्षम छ। एम। अतिरिक्त रूपमा, कृपया ध्यान दिनुहोस् कि यस मोडेलको शक्ति6किलोवाट छ।
यो बोलर "बुलेटरी" समीक्षाहरूले तथ्यको लागि पनि राम्रो हुन्छ कि यसको ढोका धेरै सहज हुन्छन्। यसको अलावा, धेरै मोडेलको कम्पैक्टनेससँग खुसी थिए। यसको उचाई 700 मिमी, चौडाई - 480 मिमी, र गहिरो - 685 मिमी छ। भट्ठीको कुल वजन 65 कि.मि. चिमनीको व्यास, बारीमा, ठूलो मात्रामा छ र 120 मिटर भन्दा बढी हुन्छ। भट्ठी शरीर आफैलाई बलियो इस्पात बनाइएको छ। इन्धन काठ र कोइलाला, भेडा, ब्रीकेट्स र पट को वाहेक चैम्बरमा लोड गर्न सकिन्छ। यो दिइयो, यो स्टोभ "बुलियन" खरीददारहरूको समीक्षाहरू प्रायः राम्रो हुन्छ।
भट्ठीमा विशेषज्ञहरूको राय "बुलरन देश" (टाइप 00)
यो ओवन "बुलियन" समीक्षा विशेषज्ञहरू फरक छन्। केहि विशेषज्ञहरु को नोटिस को रूप मा, यो मोडेल को मामला एकदम मजबूत छ। यस भट्टीमा, निर्माताले इस्पात ग्रेड 08 केपीपी प्रयोग गरे। यसको अतिरिक्त, धेरै खुसी छन् कि फिर्ता पाइप ओवल्युलाइजेशन बिना चलाउँछ। साथै यसमा अवस्थित कुनै स्थानहरू छैनन्। पाइपको व्यास 57 मिटर हुन्छ, जुन उच्च उत्पादकता सुनिश्चित गर्दछ।
साथै, विशेषज्ञहरु भट्ठी मा वेल्डिंग को उच्च गुणवत्ता को उल्लेख गरे। निर्माताहरूको अनुसार, यन्त्रको सबै विवरणहरू प्लाज्मा काटेरको लागि विशेष मेसिनमा बनाइयो। भट्टीमा आगो काठ वा कोइला लोड गर्न भने, तिनीहरू लगभग7घण्टाको लागि पर्याप्त हुनेछन्। यन्त्रको भट्ठी पूर्ण रूपमा बन्द छ। ताप एक्सचेंजर पनि स्टील बाट बनाइएको छ। सामान्यमा, मोडेललाई सस्तो मानिन्छ, त्यसैले "बुरीयन 00" को सबै भित्ता समीक्षाहरूको श्रृंखला अधिकतर सकारात्मक छ।
फर्नेस "बगलरियन क्लासिक्स" (टाइप 00)
समीक्षाहरू "बुलियन क्लासिक्स" राम्रो छ, किनकि यो अघिल्लो मोडेलको धेरै जस्तो छ। यसको शक्ति एकदम उच्च स्तरमा छ र6किलोवाट छ। यस अवस्थामा, फर्नेस 100 क्यूबिक मीटर सम्मको कुल भोल्युमको साथ एक घर निर्माण गर्न सक्षम छ। एम। साथै, धेरै तथ्य यो प्रसङ्ग हो कि निर्माताले यसलाई कुनै पनि रङ्ग गर्न सक्छ।
भट्ठी लोड गर्न को लागि, briquettes र काठ को काठ को मुख्य रूप देखि प्रयोग गरिन्छ। यस अवस्थामा, केहि मात्र काठ को बर्बाद गर्छन। जे पनि यो थियो, यस मोडेल को दक्षता 75% मा छ। यो मुख्यतया ईंधनको दुई-चरण दहनको प्रयोगको कारण हो। सुरुमा, ईन्धनलाई मात्र सङ्कलन गर्दछ, र एकै समयमा ग्यासहरू जारी गरिन्छ। दोस्रो चरणमा, ग्यासहरू पूर्ण रूपमा जान्छन्। यो सबैले लगभग 8 घण्टा लोड गर्न सम्भव बनाउँछ। भट्ठी आवरण स्टेनलेस स्टीलबाट बनेको छ। साथै, खरिदहरूले उल्लेख गरे कि किट एक सुविधाजनक स्ट्यान्ड हो।
भट्ठी को विशेषज्ञ मूल्यांकन "बुलार्जनी क्लासिक" (टाइप 00)
यो ओवन "बुलियन" धेरै पानीको सर्किट प्रतिक्रियाको साथ राम्ररी प्राप्त भयो। जस्तै विशेषज्ञहरू भन्छन्, यसको आयाम यति ठूलो स्वीकार्य उपकरणको लागि स्वीकार्य छ। मोडेल को ऊँचाई 700 मीटर, चौडाई - 480 मिमी, र गहिरो - 685 मिमी छ। भट्टीको कुल वजन पानीको सर्किटमा 65 कि.मि. चिमनी को व्यास 120 मिमी छ।
साथै, विशेषज्ञहरूले लोडिङ कक्षको गुणस्तर मूल्यांकन गरे। हैंडल धेरै तंग छन्, र ढोका खोल्न सजिलो छ। साथै, धेरै सकारात्मक पक्षमा भट्ठीको शक्ति विनियमित गर्न म्याकज्मको वर्णन। ताप को समयमा, सबै केहि सजिलै संग समायोजित गर्न सकिन्छ र एकै समयमा आंतरिक कक्ष को निगरानी गर्दछ। सबै पाइपहरू सही ओभरराइजेसन छन् र विशेष उपकरणहरूमा माइक्रोडेसमेक्स बिना निर्मित गरिन्छ।
जोडहरु को किनारों मा सलामहरु राम्रो तरिकाले मुस्कान हो, जो वेल्डिंग को उच्च गुणवत्ता को संकेत गर्दछ। साथै, विशेषज्ञहरूले ईन्धन लोडिङ सुविधाको सुविधा दिए। आगत कक्षको व्यास एकदम ठूलो छ, र यसले तपाइँलाई चाँडो चिनाई गर्न अनुमति दिन्छ।
भट्ठी "बुलियन MAXI" को बारे समीक्षाहरू (टाइप 00)
समीक्षाहरू "बुलियन MAXI" सकारात्मक छ। खरीददारों को अनुसार, यस स्टोव को क्षमता 125 cu.m. भन्दा अधिक शांत कोठा बनाउन को लागि पर्याप्त छ। एम। एकै समयमा, यन्त्रको भोल्टेजमा7किलोवाटको छ। यो सूचक अघिल्लो मोडलहरूको तुलनामा पहिले देखि नै छ। साथै, उपभोक्ताहरूले उल्लेख गरे कि भट्ठीमा बढ्दो शक्ति संग, यसको आयाम एउटै बनी। उचाई 700 मिमी छ, चौडाई 480 मिमी छ, र गहिराई 685 मिमी छ।
दक्षता एकदम उच्च स्तरमा छ। पीट briquettes र काठ को बर्बाद सजिलै संग प्रयोग गर्न सकिन्छ। यन्त्रको फर्नेस पूर्णरूपमा परिमार्जन गरिएको छ।
ओवन "बुलेरीन MAXI" (प्रकार 00) को बारेमा विशेषज्ञहरूले के भन्नुहुन्छ?
यो ओवन "बुलिरीयन" विशेषज्ञहरूको समीक्षा धेरै भागको लागि हो। विशेषज्ञहरु को अनुसार, यस मोडेल को विभिन्न औद्योगिक सुविधाहरु को लागि सबै भन्दा उपयुक्त छ। एक अधिशेष संग यसको क्षमता गोदाम तापक्रम र साथै ठूला कारखानाहरू ताप्न पर्याप्त छ।
ओवनको आयामहरू मानक हुन्, यन्त्रको वजन परिवर्तन भएको छैन र 75 कि.मि. साथै ध्यान दिनुहोस् कि किट ओवनको लागि एक विशेष स्ट्यान्ड समावेश गर्दछ, जुन स्थापना गर्न निकै सजिलो छ। चिम्नीको व्यास पनि मानक हो - 120 मिमी को स्तरमा, र यसले धेरै मनपर्छ।
भट्ठी "बुलार्जनी देश" को बारे समीक्षाहरू (टाइप 01)
समीक्षा "Boulerian देश" धेरै फरक छ। केही खरीदारहरूले भने, यो मोडेलमा ठूलो आयाम छन् र धेरैका लागि उपयुक्त छैन। भट्ठी को उचाई 845 मिमी, चौडाई - 560 मिमी, र गहिराई - 810 मिमी छ। कुल मिलाएर, यो प्रयोग गर्न राम्रो छ। काठ वा कोइला लोड गर्न धेरै सजिलो छ। एकै समयमा, क्यामेरामा ढोका खुल्ला हुन्छ। यसको संभाल सहज र इस्पातको बनाइन्छ। भट्ठी शरीर पहिले, धेरै टिकाऊ छ। धातुको मोटाई वास्तवमा4मिमी छ। एकै समयमा, दक्षता 75% छ। पावर समायोजन धेरै सजिलो छ।
भट्ठीमा विशेषज्ञहरूको राय "बुलरन देश" (टाइप गर्नुहोस् 01)
यो बुर्जो "बुलियन" विशेषज्ञहरूको समीक्षाले आफैलाई राम्रो कमायो। धेरै विशेषज्ञहरूले विश्वास गर्छन् कि 11 कि.वा.वा.वा.मा एक किलोको क्षमता 200 क्यूबिक मीटरको कोठा बनाउन पर्याप्त छ। एम। एकै समयमा तिनीहरू खरीददारसँग सहमत हुनुहुन्छ कि यो मोडेलको आयाम धेरै ठूलो छन्।
अन्य चीजहरूमध्ये, धेरैले ताप्लेजुङ-एक्सचेंजको गुणस्तरबारे उल्लेख गरे। ती सबै घनिष्ठ राखिएका छन्, र व्यावहारिक रूपमा वेल्डिंगको कुनै ट्रेस छैन। धातुको मोडा आफैलाई सबै आवश्यकताहरूको अनुपालनमा बनाइएको छ। भित्री सतहमा कुनै विकृति देखिएन। यसको अतिरिक्त, माध्यमिक कक्ष को धेरै को मूल्यांकन को सराहना गरे। यसको चिम्नी शाखाको सही आकार छ र राम्ररी काम गर्दछ।
एकै समयमा, स्कूपमा राम्रो व्यास छ। साथै, विशेषज्ञहरूले पछिल्ला प्यानलको उपकरण पहिचान गरेका छन् जुन दुई प्लेटहरू छन्। माथिको सबै विचार, विशेषज्ञहरु बाट "बुरीयन" समीक्षा को हीटिंग केवल राम्रो छ।
फर्नेस "बगलरियन क्लासिक्स" (टाइप 01)
उपभोक्ताओं लाई सामान्यतया यस भट्ठी को उपयोग को सुविधा को सराहना गरे। लोडसेडिङ च्याम्बरमा6किलो किलोग्राम काठको रूपमा सजिलै घुसाउन सकिन्छ। यो9घण्टाको लागि 80 वर्ग मीटरको कोठा उचाल्न पर्याप्त हुनुपर्छ। एम यो पनि उच्च दक्षता मा ध्यान दिनु आवश्यक छ। सामान्यतया, यो मोडेल धेरै आर्थिक छ। यदि तपाईं कोयला प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, एक घण्टा 12 घण्टाको लागि कोठामा उचाल्न पर्याप्त छ। साथै, यो ओवन "बुलियन" समीक्षाहरू प्रयोगकर्ताहरू ठोस निर्माणको लागि राम्रो हुन्छ।
भट्ठीमा विशेषज्ञहरूको राय "बुलाजन क्लासिक्स" (प्रकार 01)
सामान्यतया, विशेषज्ञहरूले यो मोडेललाई सहज र शक्तिशाली मान्छन्। यसो गर्दा, योसँग सबै फाइदाहरू छन् जुन अघिल्लो मोडहरूमा प्रदर्शन गरिन्छ। यन्त्रको माध्यमिक क्यामेरा एकदम बलियो छ। यस स्थानमा धातुको मोटाई4मिलीमिटर पुग्छ। साथै, विशेषज्ञहरूले बुट डिब्बाको सुविधालाई उल्लेख गरे। यसको ढोका सुचारु हुन्छ र राम्रो सील प्रदान गर्दछ।
अगाडिको पर्खाल निकै बलियो छ र इंजेक्टरको राम्रोसँग सुरक्षित गर्दछ। सबै पावर नियन्त्रकहरू सजिलै कन्फिगर योग्य छन्। चिमनीको ह्यान्डल, बारीमा, सुरक्षित रूपमा निश्चित छ। साथै, सकारात्मक पक्षका धेरै विशेषज्ञहरूले आश-ग्याटको कामलाई ध्यान दिए, जो पछाडि प्यानल पछि लुकेको छ। सामान्यतया, यो मोडेल ठूलो घरहरू तापनि व्यावहारिक र शक्तिशाली उपकरणको रूपमा वर्णन गर्न सकिन्छ।
ड्रिल-मिक्सर: चयन र अपरेसन
धुलाई मिसिन: आयामहरू। कसरी आकारमा धुने मेसिन छान्नु हुन्छ?
वन्यजन्तु: रातो स्तन संग चरा
समुद्र छुट्टी, वा कार द्वारा क्रिमीआ प्राप्त गर्न कसरी
पुरातन मानिसको जीवन। प्राचीन मानिसहरूको जीवनशैली
अनातोली Harlampiev - जुडो, स्याम्बो कोच
Punta Cana (डोमिनिकन गणतन्त्र) मा होटल Sirenis Punta Cana Resort क्यासिनो र Aquagames 5: * समीक्षा
पेशों र आफ्नो आवेदन व्यावसायिक स्तर
Nosov बच्चाहरु को लागि काम गर्दछ: पुस्तकहरू सूची, रोमाञ्चक साहसिक र हास्यास्पद कथाहरू पूर्ण